Ukubuyekezwa kweHollywood Psychics - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubuyekezwa kwe-Hollywood Psychics
Amaphuzu avelele e-Hollywood Psychics
Isiphakamiso esivelele sokuqala: Amaminithi amathathu okuqala mahhala kanye no-$ 1 ngomzuzu kuze kufike kumaminithi we-30
I-Boasts yokuba "nenqubomgomo yokubuya elula kunazo zonke," ukunikeza ukukhetha ukubuyiselwa imali noma isikweletu uma unganelisekile
Uhlelo lwe-Flyer "olujwayelekile": Amakhasimende avamile athola ibhonasi imizuzu
Zonke izimo zengqondo kumele zibonise ngempumelelo ukufundiswa kwesampula nabasebenzi ngaphambi kokuba kuqashwe
Ingxoxo yefoni kanye nengxoxo ye-intanethi iyatholakala
Ucebile lwezihloko ezinhlobonhlobo zezihloko ze-metaphysical ezitholakala kalula
Hlunga abeluleki ngokukhethekile kanye nokusondela ekunikeni iseluleko
Khuluma ukuze uphile isevisi yamakhasimende ngefoni 24 / 7
Amasevisi ngekhamera yewebhu ayitholakali okwamanje
Ngemuva kokunikezwa kokuqala, zonke izilinganiso ze-psychic ziyi-$ 5 ngomzuzu, okungeyona eshibhile ngaphandle
I-imeyili ukufundwa kwengqondo akutholakali okwamanje
Hollywood Psychics ayithathi nje noma yimuphi umfundi we-psychic noma we-tarot ofuna ukuvula isitolo, njengamanye amasayithi enza. Labo abafuna ukusebenza kule nkampani kumele bagcwalise uhlelo lokusebenza, bese kudlulisela ukufundwa kwesampula ezimbili ngabasebenzi. Khona-ke bangakwazi ukuza ebhodini ukuhlinzeka ngezinsizakalo ze-psychic nokufundwa kwe-tarot kwala maklayenti enkampani.
Ngenxa yokuthi abangekho ebhizinisini uma nje amanye amasayithi futhi ezama ukukhetha kakhulu labo abaqashile, ungase ungatholi echibini elikhulu lokukhetha njengamanye amasayithi. Kodwa ikhwalithi ngaphezu kwenani, kunjalo?
Wonke umeluleki onamandla angahlolwa ngaphambi kokuba abe I-Hollywood Psychic, ngakho-ke kufanele nje ukhethe ukufaneleka okuhamba phambili usebenzisa uhlelo lwawo lokuhlunga lezinqubo eziningi. Nciphisa ukukhetha kwakho ngamathuluzi wokufunda afana namakhadi we-tarot noma i-astrology. Ingabe ufuna i-medium, empath, noma ngisho ne-psychic yesilwane? Ayikho inkinga. Vele uhlunge imiphumela yakho. Abanye abeluleki nabo bahlose ngezihloko ezithile, ezifana nezinkinga zobudlelwane noma umsebenzi kanye nezemali. Izinga eliphezulu likaHollywood Psychics lokuhlola liyingxenye engcono kakhulu esiyibonile endaweni yokuthengisa emakethe ye-psychic.
Ungathenga kuze kufike ku-30 isikhathi sokukhuluma nge-$ 1 kuphela ngomzuzu njenge-Isaphulelo sakho sokusungula, okuyisinye sezipesheli ezinikezwa kakhulu kunoma yikuphi isayithi lokufunda ngengqondo. Abanye abaningi banikeza izintengo ezilinganayo zokuqala, ngokuvamile ngesilinganiso esiphansi kakhulu emaminithini ongayithenga ngezinga elincishisiwe.
Ngemuva kwesaphulelo sakho sokuqala, amanani wokufunda ayi-$ 5 ngomzuzu. Hollywood Psychics futhi inikeza uhlelo lokugqugquzela ikhasimende, okuthiwa i-Membership Perks. Kuzo zonke izibuyekezo ze-10 ngenyanga okungenani kwemizuzu engu-10, uzothola imizuzu emihlanu yamahhala ebhonasi, kuze kube ngu-15 imizuzu yamahhala ngenyanga.
Ungakhetha ukufundwa kwengqondo ngefoni, noma uxoxe nge-intanethi nomeluleki uma ufuna okuthile okuhlakaniphile. Hollywood Psychics okwamanje ayinikeli ingxoxo ye-webcam, engavumela ukuxhumana okuqondile, okuxhumana naye. Aphinde anikeze ukufundwa kwe-psychic imeyili. Noma kunjalo, ukufundwa kwe-imeyli kungalinganiselwe kakhulu kunokwazi ukunikeza impendulo noma ubuze imibuzo elandelwayo ngaphandle kokuthenga enye iseshini ye-imeyli.
Ama-Psychic amaphrofayli anemibhalo eqoshiwe yabafundi be-psychic, ngakho-ke ungahlola umeluleki ngaphambi kokuthenga ukubonisana.
Eziningi izinsizakalo zengqondo zinikeza isikweletu ku-akhawunti yakho uma ungenelisekile, kodwa Hollywood Psychics empeleni uzobuyiselwa imali yakho uma ungathanda. Ukuze uthole imali yokubuyiselwa kwemali kumele uhlangabezane nemikhombandlela embalwa, njengokuxhumana nomsebenzi wamakhasimende ngosuku olulodwa lokufunda. Kumele futhi kube ngokufunda kwakho okukhokhelwe kakhulu, ngoba abakwazi ukubuyiselwa imali yokufunda mahhala.
Uma ungenelisekile ngolunye lwezifundo zakho zokuqala, cabanga ukuthola isikweletu se-akhawunti ukuze uzame enye ingqondo. Ngezinye izikhathi abafundi be-psychics kanye ne-tarot abahluleki ukuxhumana okokuqala ngqa. Ngesiqiniseko esinjalo esihle kakhulu, akukho monakalo ekuhambeni kwembuyiselo yemali kamuva.
Hollywood Psychics unikeza ukhetho oluningi olwengeziwe lwezengqondo ezingeni elilinganiselwe ngemuva kokuthi isaphulelo sakho sokuqala siphelelwe yisikhathi, kodwa sikunikeza ukunikezela okuphakelayo kwemizuzu ukuze uzame isevisi ku-$ 1 ngomzuzu. Futhi uma ungajabuli, awuphoqeleki ukuba thola isikweletu, kodwa ungabuyiselwa imali yakho. Akukho neze engozini ehilelekile.
Hollywood Psychics ayithathi nje noma yimuphi umfundi we-psychic noma we-tarot ofuna ukuvula isitolo, njengamanye amasayithi enza. Labo abafuna ukusebenza kule nkampani kumele bagcwalise uhlelo lokusebenza, bese kudlulisela ukufundwa kwesampula ezimbili ngabasebenzi.